Soo dejisan Polaris Office 7.3 – Android – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwarePolaris Office
Bogga rasmiga ah: Polaris Office
Polaris Office – editor awood leh in ay la waraaqaha Xafiiska Microsoft shaqeeyaan. software waxa uu ka shaqeynayaan ballaaran si edit faylasha iyo la qaabab dokumentiga ugu wayn, oo ay ku jiraan PDF shaqeeyaan. Xafiiska Polaris waa awoodaa inuu Abuuro qoraalka waraaqaha, bandhigyo iyo go’yaal. software The macaamila storages daruur caan ah oo u saamaxaaya in ay si wadajir ah ula shaqeeyaan waraaqaha lagu kaydiyaa. Xafiiska Polaris ku jira go’an habyaalada dhisay-in, tiro ka mid ah saamaynta waayo, bogagga, gooldhalinta 2D iyo 3D kala duwan. Xafiiska Polaris kuu ogolaanaya in aad ku dar photos iyo video files qabtay by camera qalab dokumentiyada ah.
Waxay abuurtaa, views iyo tifatirada dukumentiyada Microsoft Office
Galitaanka of PDF
set A habyaalada
Isku dhex leh storages daruurtii
Unpacks buugagga taariikhda ZIP
Soo dejisan Polaris Office
Faallo ku saabsan Polaris Office
Polaris Office Xirfadaha la xiriira